Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Saron-tava mandatory miverina any London Underground
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Raha ampiharina, ny fanovana natolotry ny ben'ny tanàna Khan dia hamerina amin'ny laoniny ny toe-javatra amin'ny fitateram-bahoaka any Londres ho amin'ny fepetra alohan'ny 19 Jolay.
Ny saron-tava mitafy Tube dia takin'ny lalàna indray atsy ho atsy.
Ny masking tsy maintsy atao ihany no hahatonga ny olona hahatsapa ho voaro amin'ny fitateram-bahoaka indray.
Nalefa tamin'ny 19 Jolay ny fisaron-doha tsy maintsy hatao any Angletera.
Ben'ny tanànan'i Londres Sadiq Khan dia manentana ny fiverenan'ny sarontava tsy maintsy atao amin'ny London Tube, mitady ny hametrahana azy ho lalàna kely, amin'izay dia ahafahan'ny Polisy misahana ny fitaterana anglisy hampihatra izany ary hametraka sazy mihatra amin'ireo izay mitaingina fiaran-dalamby tsy misaron-tava.
Ben'ny tanànan'i Londres Sadiq Khan
"Miezaka ny handroba ny governemanta izahay hamela anay hitondra lalàna mifehy, ka io no ho lalàna indray, mba hahafahanay mamoaka fampandrenesana sazy voafetra ary afaka mampiasa ny serivisy polisy sy ny BTP izahay hampiharana izany," hoy i Khan , miampy fa ny masking mandatory ihany no hahatonga ny olona hahatsapa ho voaro amin'ny fitateram-bahoaka indray.
Ny fanerena ny fanaovana saron-tava indray dia hahatonga ny olona hahatsapa ho azo antoka kokoa ary hampirisika azy ireo hampiasa Tube, hoy ny ben'ny tanàna.
Ny fanaovana saron-tava tsy maintsy atao any Angletera dia nilatsaka tamin'ny 19 Jolay, na dia nanohitra tsy tapaka aza izany fihetsika izany. Alohan'ny 'Andron'ny fahalalahana', izay namarana ny fanaovana sarontava, dia nangataka tamin'ny Transport for London (TfL) izy mba hampihatra izany ho toy ny “fepetra fitaterana,” izay ahafahan'ny mpiasan'ny TfL mangataka amin'ireo mpandeha tsy manara-dalàna hiala ny bus na ny fiaran-dalamby.
Raha ampiharina, ny fanovana natolotry ny ben'ny tanàna Khan dia hamerina amin'ny laoniny ny toe-javatra amin'ny fitateram-bahoaka any Londres ho amin'ny fepetra alohan'ny 19 Jolay. Na eo aza ny fanalefahana fameperana, manodidina ny roa ampahatelon'ny olon-dehibe any Angletera no mbola mikasa ny hanohy hisaron-tava, araka ny antontan'isa ofisialy. Ny isan'ny olona manao sarontava amin'ny fitateram-bahoaka ihany koa dia mijanona ho avo, miaraka amin'ny manodidina ny 85% ny mpandeha Tube, bus, ary ny lamasinina manohy manao izany.